» पाई मेननेट लाईभ भयो, अब यस्तो सेटिङ गर्नुहोस्
१८ पुष २०७८, आईतवार २१:१०
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १८ पुस । केही वर्षदेखि पर्खाईमा रहेको नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी पाई अब मेननेटमा लाईभ भएको छ । केही वर्ष टेष्टिङ फेजमा रहेको यो पाई क्वाईन डिसेम्बर २९ देखि मेननेटमा लाईभ भएको हो । मेननेटमा लाईभ भएसँगै पाई माईनिङ गरिरहेका विश्वका प्रयोगकर्ताहरुमाझ खुशी छाएको छ । पाई मेननेट लाईभ भएपछि के के परिवर्तन भयो त ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ ।
मेननेटमा लाईभ भएसँगै अब यसमा एउटा नयाँ अप्सन थपिएको छ । त्यो अप्सन हो ‘प्रिभ्यू मेननेट माईनिङ सिमुलेसन’ । यो अप्सन तपाईले पाईको होमस्क्रिनमा भएको मेननेट ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेर पनि हेर्नसक्नुहुन्छ । त्यसका साथै तपाईले मेनुबाट पनि स्क्रोल गरेर हेर्नसक्नुहुन्छ । मेनुबाट जानका लागि सुरुमा यो ३ वटा बारमा क्लिक गर्नुहोस् र मेननेट भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस् । अब तपाईले अप्सनहरुको तल प्रिभ्यू न्यू मेननेट माईनिङ सिमुलेसनमा थिच्नुहोस् ।
–त्यहाँ तपाईले सिमुलेटेड टोटल माईनिङ रेट देख्नसक्नुहुन्छ । यो रेटमा थिच्नुभयो भने यसको अहिले एक्ज्याक्ट भ्यालु कति छ भनेर पनि देखाउँछ । जस्तै यसमा थिच्दा यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु देखाउँछ ।
–यसको तल तपाईले बेस रेट, बुष्टर्स र रिवार्डस् देख्नुहुन्छ । यसमा पनि पाईको भ्यालु हेर्नमिल्छ । तर यो भ्यालु चाहिँ अहिले हामीले कमाएको पाईको रेट होईन भनेर सूचनामा भनिएको छ । यसबारेमा सायद पछि केही अपडेट आउनेछ । त्यसपछि तल दुई वटा अप्सन छ । बुष्टर्स र रिवार्डस् । यसको बारेमा आउनुहोस् एक एक चर्चा गरौँ ।
१) बुष्टर्स–बुष्टर्सबाट हामी माईनिङ रेट बढाउन सक्छौँ । यसमा पाईयोनियर, सेक्युरिटी सर्कल र लकअप रिवार्डबाट हामी माईनिङ रेटलाई बढाउन सक्छौँ । तपाई कहिले पाईयोनियर बन्नुभयो, सेक्युरिटी सर्कलमा कति जना राख्नुभयो र लकअप सेटिङ गर्दा कति गर्नुभयो भन्ने कुरामा यो निर्भर रहन्छ । रिफर गर्ने र सेक्युरिटी सर्कल बनाउने भन्नेबारेमा मैले धेरै अगाडि र लकअपड कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही दिनअघि भिडियो बनाएको थिएँ । तपाई हेर्नचाहानुहुन्छ भने त्यस भिडियोलाई यो भिडियोको अन्तमा, आई आईकनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु । कृपया त्यसमा हेर्नसक्नुहुन्छ । तपाईले तल ईन्क्रीज भन्ने अप्सनमा थिचेर पनि सिधै केही सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।
२) रिवार्डस–रिवार्डस अप्सनमा चाहिँ पाईयोनियर, रिफरल टिम, युटिलिटी युजेज बोनस र नोड बोनसबाट रिवार्डस बढाउन सक्छौँ । तपाईको रिफलरल टिममा कति जना छ ? र कति जना सक्रिय छन् भन्ने कुराले यसमा खास अर्थ राख्छ । त्यस्तै पछि पाईको युटिलिटि प्रयोग गर्दा र नोड प्रयोग गर्दा पनि बोनस पाईन्छ । युटिलिटि युजेज बोनस र नोड बोनस चाहिँ छिट्टै उपलब्ध हुनेछ । यसमा ईन्क्रीज अप्सनमा थिचेर तपाईले तपाईको सक्रिय नभएका रिफरल टिमका सदस्यहरुलाई पिङ गरेर उनीहरुलाई सक्रिय बनाउने नोटिफिकेसन पठाउन सक्नुहुन्छ । अथवा पाई ब्राउजर र नोडलाई रन गरेर रिवार्ड बढाउन सक्नुहुन्छ ।
आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई पाई एपको यो अपडेट कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । तपाईका कुनै प्रश्नहरु छन् भने पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् । मेरो अन्य च्यानल र सामाजिक संजालहरुको लिंक यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ । कृपया ती च्यानललाई पनि सब्स्क्राईब गरेर र मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गरेर सहयोग गरिदिनुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–